चुम्बन गर्दा 'किसिङ डिजिज'को खतरा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ चुम्बन गर्दा ‘किसिङ डिजिज’को खतरा
चुम्बन गर्दा ‘किसिङ डिजिज’को खतरा
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७८ फागुन ३० गते, १६:३० मा प्रकाशित
के तपाई एउटै सिसीबाट कोक पिउनुहुन्छ ? के तपाई एउटै चम्चाले आइसक्रिम खानुहुन्छ ? यदि यस्तो गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोस्। चुम्बन र जुठोबाट ‘किसिङ डिजिज’ सर्न सक्छ । चुम्बन गर्ने रोगलाई मेडिकल भाषामा संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस वा ग्रन्थी फिभर भनिन्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार चुम्बन रोग धेरै भाइरसबाट सर्ने गर्छ। तर, ९० प्रतिशत केसमा यो रोग मानिसको र्‍यालबाट हुने एपस्टेन बार भाइरस (ईबीभी)बाट सर्ने गरेको देखिएको छ । जब चुम्बन गर्दा एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछ, भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र त्यसपछि शरीरभर फैलिन्छ। अमेरिकी संस्था सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी ) का अनुसार चुम्बन रोगलाई मानव हर्पेस ४ पनि भनिन्छ। यो भाइरस हर्पेस परिवार को एक भाइरस हो।
एपस्टीन बार भाइरसले सामान्यतया युवा र किशोरकिशोरीहरूलाई असर गर्छ। बालबालिकामा सङ्क्रमण भए पनि लक्षणहरू कम देखिन्छन् भने वृद्धहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ। यो भाइरस रक्तसञ्चार, यौन सम्पर्क, खोक्दा र हाछ्युँबाट सर्छ।
चुम्बनबाट सर्ने यो रोगको कुनै खास उपचार छैन। यो एक भाइरल रोग हो जहाँ एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। तसर्थ, रोग सहायक उपचार संग उपचार गरिन्छ। सामान्यतया यो रोगका सबै लक्षणहरू १ महिनामा हट्छन्। यो रोगबाट बच्न कुनै खोप बनेको छैन ।
निम्न उपाय अपनाएर यसबाट बच्न सकिन्छ-
भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको १ हप्तापछि थकानसँगै ज्वरो आउने, शरिर दुख्ने र घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
घाँटी दुखेको बेला कम बोल्नुहोस्।
मनतातो पानीले कुल्ला गर्नुहोस्।
मुख र अन्य सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्।
परिवारमा कसैलाई पनि झुठो भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्न नदिनुहोस्।अरू कसैको गिलास प्रयोग नगर्नुहोस्।
खाना र पेय अरूसँग शेयर नगर्नुहोस्।
चुम्बन रोग जसलाई संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस पनि भनिन्छ। केही सावधानी अपनाएमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ ।